प्रविधि, सेल फोनहरू
मोबाइल फोन अपरेटिङ सिस्टम अद्यावधिक गर्दै एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। तर तपाई सधैँ ओएसको नवीनतम संस्करण स्थापना गर्न आवश्यक छैन। कहिलेकाहीं यो पुरानो विधानमा बस्न योग्य छ। प्रायजसो, मोबाइल यन्त्रमा प्रणाली अद्यावधिक गर्ने मुद्दा आईफोनको मालिकहरूलाई हर्षित। आखिर, नयाँ ओएस संग नयाँ र रोचक विशेषताहरु जुन लगभग सबैलाई आकर्षित गर्दछ। आज हामीले आईओएसमा आईओएस 8 कसरी स्थापना गर्ने भनेर जान्नै पर्छ। 8. के मैले यो सबै कुरा गर्नुपर्छ? तपाईंले सामना गर्न सक्ने प्रक्रियाको विशेषताहरू के हो? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ तल दिइएको छ।
के म आईओएस 8 स्थापना गर्न सक्छु
पहिलो चरण बुझ्न को लागी विचार कसरी गर्ने विचार हो। के म आईफोन4मा आईओएस 8 स्थापना गर्न सक्छु?
यस प्रश्नको जवाफले तपाईंलाई पर्खिरहेको छैन। हो, तपाई वास्तवमा आईफोनमा अपरेटिङ सिस्टमको नवीनतम संस्करण स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो यसको लायक छ?
आफैलाई, आईफोन4अति शक्तिशाली छैन। यसैले, यसलाई "आठ" सेट गर्न सिफारिस गरिएको छैन। कुरा यो हो कि आईओएस 8 मा एक smartphone संग काम गर्दा ब्रेक र ढिलाइ छन्।
तर आईफोन4एसका मालिकहरूले सजिलै जीवनमा विचारलाई लागू गर्न सक्छन्। यो ध्यान दिइन्छ कि यस अवस्थामा, ढिलाइ धेरै ठूला छैनन्, तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा ध्यान दिएनन्। तदनुसार, कुनै पनि जवाफ छैन। सबैजना आफैले निर्णय गर्नैपर्छ कि वास्तवमा आईओएस 8 संस्करणको आवश्यकता छ कि छैन।
अद्यावधिक गर्ने विधिहरू
यदि तपाईं "सेब" ओएसको नवीनतम निर्माणको साथ काम गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई बिना कठिनाई गर्न सक्नुहुनेछ। आईफोन4मा आईओएस4कसरी स्थापना गर्ने? त्यसै गरी कुनै पनि "एप्पल" ग्याजेटको साथ। एप्पलका लागि सफ्टवेयर अद्यावधिकहरूको सिद्धान्तहरू सधैं हुन्।
तिनीहरूमध्ये, निम्न विधिहरू प्रतिष्ठित छन्:
ITunes प्रयोग गर्दै
इन्टरनेटको साथ काम गर्नुहोस्।
कसरी कार्य गर्ने? सबैले आफैले निर्णय गर्छन्। यो सबै स्मार्टफोनको मालिकको प्राथमिकताहरूमा निर्भर गर्दछ। तपाईं आईफोन4आईओएस 8 र एक विशेष कार्यक्रम मार्फत स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, र सजिलै संग एक स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडान प्रयोग गरेर। अर्को, हामी घटनाहरूको विकासको प्रत्येक संस्करणको बारे थप विवरणमा कुरा गर्नेछौं।
चलो सबैभन्दा सामान्य तरिकाको साथ सुरू गर्नुहोस् - आईट्यून्ससँग काम गर्दै। यो अनुप्रयोग "सेब" ग्याजेटहरूको हरेक मालिकको लागि हुनुपर्छ। यसको साथ, तपाईं छिट्टै डेटा पुनःस्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी डाउनलोड गर्न वा सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
आईफोन4मा आईओएस4कसरी स्थापना गर्ने? तपाईं भर्खरै सानो निर्देशन पछ्याउन आवश्यक छ। यो केहि जस्तै यो देखिन्छ:
प्रयोगमा ग्याजेटको लागि iTunes को नवीनतम संस्करण स्थापना गर्नुहोस्।
आईफोनमा पीसी जडान गर्नुहोस्। यो गर्न, हामी USB केबल प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं।
ITunes सुरु गर्नुहोस्। यन्त्रहरू सिङ्क नभएसम्म पर्खनुहोस्।
जोडिएको फोनको नाममा सञ्झ्यालको बायाँ छेउमा क्लिक गर्नुहोस् र "सामान्य" ट्याबमा जानुहोस्।
अनुप्रयोगको दायाँ भागमा, "अद्यावधिक" बटन खोज्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र बिट पर्खनुहोस्। अद्यावधिकहरूको लागि स्मार्टफोन जाँच गरिनेछ।
आगामी अद्यावधिकको बारे जान्नुहोस्। सञ्चालनको साथ सहमत हुनुहोस् र लेख "क्लिक र अद्यावधिक गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
अहिलेबाट यो स्पष्ट छ कसरी आईओएसमा आईओएस 8 स्थापना गर्ने कार्यहरू गरेपछि केही छोटो पर्खनु आवश्यक छ। परिचालन प्रणाली अद्यावधिक हुनेछ, जसको पछि स्मार्टफोन रिबुट हुनेछ। छिटो, सजिलो, सजिलो!
तर यो अपग्रेड विकल्पहरू मध्ये मात्र एक हो। प्रस्तावित एल्गोरिथ्म को अतिरिक्त, तपाईं कार्य कार्यान्वयन गर्न वायरलेस इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो समाधान धेरै प्रक्रियाको सुविधा दिन्छ।
के म आईफोन4मा आईओएस 8 स्थापना गर्न सक्छु? सजिलो! विशेष गरी यदि प्रयोगकर्ताले नजिकैमा Wi-Fi मा पहुँच गरेको छ। यो विकल्प सजिलो हो, तर यो विश्वसनीय छैन। सफल सफ्टवेयर अद्यावधिकहरूको लागि कुनै ग्यारेन्टीहरू छैनन्।
Wi-Fi प्रयोग गरी आईफोन4मा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड गर्न तपाईंलाई आवश्यक छ:
यन्त्रमा ताररहित इन्टरनेट जडान गर्नुहोस्। यसो गर्न, "सेटिङ्हरू" मा जानुहोस् - "सञ्जाल" - "Wi-Fi", र त्यसपछि स्विच-लेभरलाई मोडमा सार्नुहोस्। अर्को, प्रयोगकर्तालाई जडान गरिनेछ कि सञ्जाल चयन गर्न सोधिने छ। आवश्यक भएमा, पहुँच पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
"सेटिङ्हरू" मा जानुहोस् - "सामान्य" - "सफ्टवेयर अद्यावधिक।"
यो सूचीमा सूचीमा "शब्दहरू र डाउनलोड गर्नुहोस्" मार्फत रेखामा क्लिक गर्नुहोस्।
डाउनलोड समाप्त भएपछि, "स्थापना" मा क्लिक गर्नुहोस् र थोडा पर्खनुहोस्।
यस चरणमा, सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। अद्यावधिक स्थापित छ, र यन्त्र फेरि रिबूट हुनेछ। अर्को, स्मार्टफोनको मालिकले आईट्युन्स वा iCloud मार्फत जानकारी पुनर्स्थापना गर्न प्रस्तावित गरिनेछ।
Wi-Fi को साथ कामको विशेषताहरू
चौथो आइफोनमा आईओएस 8 कसरी स्थापित गर्ने कुरा स्पष्ट छ। यो ध्यान दिनुपर्छ कि Wi-Fi मार्फत अपरेटिङ सिस्टमको अद्यावधिकहरू धेरै सुविधाहरू छन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई खातामा लगाउनुहुन्न भने, तपाइँ ओएस सुरूकरण प्रक्रिया असफल गर्न सक्नुहुन्छ।
"एप्पल" स्मार्टफोनको प्रत्येक मालिकले यी सिफारिसहरू पालन गर्नुपर्छ:
सफ्टवेयर अपडेट सुरु गर्नु अघि तपाईंले फोन चार्ज गर्नु पर्छ। यो राम्रो छ कम्तीमा 50% शुल्क चार्ज।
कहिलेकाहिँ Wi-Fi मार्फत एक अद्यावधिक सफलतापूर्वक पूर्ण गर्न सकिएन। यस अवस्थामा, यो त फेरि प्रयास गर्न सुझाव दिइएको छ, वा आईट्यून्स प्रयोग गर्नुहोस्।
अपरेटिङ प्रणाली पृष्ठभूमिमा सुरु हुन्छ । आईओएस 8 को लगभग 1 जीबी वजन हुन्छ। तदनुसार, यो थोडा पर्खनु आवश्यक छ। यो समयमा यो मोबाइल फोनको साथ काम गर्न सिफारिश छैन। यसलाई बन्द गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न।
Wi-Fi को माध्यमबाट अद्यावधिक गर्दै आईफोनमा जगेराको साथ मात्र सम्भव छ।
यो सबै सम्झना यति गाह्रो छैन। यदि अद्यावधिक गर्ने कुनै तरिकाले मद्दत गरेको छ भने, तपाइँले Apple समर्थनलाई सम्पर्क गर्न वा उपकरणलाई सेवा केन्द्रमा लैजान आवश्यक छ।
एसएमएस पुनर्स्थापित गर्न फोन कसरी सरल र प्रभावकारी तरिका
TWRP - यो के छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
स्मार्टफोन "नोकिया 735": एक अवलोकन, निर्दिष्टीकरण, समीक्षाहरू, तस्बिरहरू
स्मार्टफोन दूर2मिनी (कालो): मालिकको प्रतिक्रिया र प्राविधिक विशिष्टताहरू
फोन एफोनफोन 8 84जी एलटीई: समीक्षा र सुविधाहरू
प्रधान मंत्री समूह: पुरानो लाइन अप, हिट्स र सहभागीहरू
हातको त्रिज्याको फ्रिजले व्यवहार गर्नुपर्छ
दिउँसो - यो कति समय छ? दिन को समय - दिन। AM - समय
खेल Stupidella: खण्डमा। द्रुत खण्डमा Stupidella खेल
एक सस्तो केक को लागि एक सरल नुस्खा
सन्त मेरिना डिलक्स 3: * विवरण, समीक्षा
बुकमेकर: कसरी खोल्न, कहाँ सुरू गर्न
स्थान, आकर्षण र रोचक तथ्य: लारनाका कहाँ छ
खाद्य पदार्थ मा भिटामिन ए लिएर स्वास्थ्य प्रचार
क्रिसमस कमेडी: को जाडो ब्रेक मा हेर्न?